I-Botulism yezingane Amakhasi ombala wamahhala wokulanda
Umthelela onobuthi uju kanye nesiraphu ye-maple ezinganeni
Akukho uju futhi akukho isiraphu ye-maple kuze kube yilapho okungenani i-1. lokuzalwa
Isifo akunjalo ezivamile kodwa esinzulu ezinsaneni kuyinto botulism kwezinsana. Botulism lisuselwa Latin botulus (isoseji), okubizwa ngokuthi inyama ubuthi futhi a ezisongela ukuphila, yi-ubuthi obubangelwa botulinum (Clostridium igciwane botulinum) kubangelwa ubuthi.
I-botulism yezingane ezinamanzi noma isiraphu
Njengomthwali we-toxin ukufaka uju noma isiraphu ye-maple ukuze i-sweeten z. Njengoba i-teas noma i-porridge yomntwana ebizwa. Ukunambitheka uju kunomnandi okumnandi futhi kuyidlase yokudla, ebuye isetshenziselwe izinjongo zokwelapha. Ijusi legolide linikezwa izici eziningi zezempilo kodwa lokhu ukudla akuhambisani nokubhalisa. Ukuze kubulawe ukudla kwe-bacterium kufanele kube nokushisa ngaphezu kwama-120 ° degrees isikhathi eside. Lokhu akunakwenzeka ngoju. Ungumkhiqizo wemvelo ngakho-ke uhlinzekwa ezitolo.
I-Botulism Yenganeni - Ingozi kubantwana ngokusebenzisa uju
Kahle alondolozwe noma hermetically uphawu ukudla, ngakho uju noma Maple isiraphu, okuye ingcoliswe le ubuthi, le spore yakha igciwane futhi ukufinyelela ukusetshenziswa izitshalo emathunjini.
Ngo izinsana enyakeni owodwa, abasengcupheni kakhulu 6 izinyanga, ne engazinzile ngaphezulu umzimba ukuzivikela futhi ebuthaka izitshalo emathunjini, kuyinto Ubuthi zithutha ngokusebenzisa septum emathunjini bungene egazini kusukela ngaleso sikhathi kuqhubeke kuba kuya eziyimpumelelo ezinzwa neuropathy isimiso sezinzwa lapho kukhululwa i neuronal ezibalulekile isithunywa is kuvinjelwe.
Umthelela we-poison uvimbela ukusayina phakathi kwamagciwane nemisipha. Ukukhubazeka kwemisipha yokukhubazeka kuzo zonke izifunda zomzimba nezigungu kanye nesitembu samathumbu yisisusa esibi. Umphumela we-toxin awuqapheli ngaso sonke isikhathi ngokushesha, ngokuvamile izimpawu zingabonakala kuphela ngemva kwezinsuku, ngisho namasonto. Buthakathaka izicubu iso, ukungabi sobuso, ukukhubazeka kwemisipha yokuphefumula kuze kube iphika ukumisa ukuphefumula, ukugwinya, futhi ukuba buthakathaka kwezicubu of the system zemisipha izimpawu ubuthi by botulinum futhi lingaholela ekufeni uma kungenjalo ngokushesha, oluphuthumayo kanye ukunakekelwa nezibi. Ngaphansi kokutholakala okuphelele kokwelashwa kungenzeka kodwa kufanele ulindele umonakalo owodwa.
Njalo ngonyaka icala lokusana ne-botulism libikwa ku-Robert Koch Institute eBerlin. Ucwaningo ngaloluhlobo lwe-poisoning nemiphumela yalo lwenziwa eYurophu kusukela ngo-1976, ngemuva kokuqala kwecala futhi kwafunyanwa eMelika. Amacala amaningi avele kancane kancane e-Australia, e-US nasendaweni yaseJapane. Kukhona uxhumano ne-infant syndrome yangasana ngokuzumayo. EYurophu, kunesibopho sokubika ngaphansi koMthetho Wokuvikelwa Kwegciwane.
Ukuze impilo yengane, kuze kufike usuku lokuzalwa lokuqala, kufanele isetshenziswe ngesipho soju kanye nesiraphu ye-maple ukuze ugweme ingozi yokusana ne-botulism ukuze ugweme.
Ngo izinsana, izingane, intsha kanye nabantu abadala, nge esebenza ngokugcwele izitshalo emathunjini bese ikholoni septum enempilo, ubuthi is excreted, ngaphandle okuyinto lingena emgudwini wegazi emzimbeni, njengoba kwenzeka ngokusebenzisa ukuthi ayatholakala uju ngemithamo ongaphakeme. Ukurekhodwa ubuthi nabancelisayo, uju ngiyikhiphile kubo Ngakho benganikezwa.
Okungafani nalokhu, noma kunjalo, ukwelapha ukulimala kanye nokuphulukisa kwamazinyo onoju. Ngokuvamile, kufanele kuqashelwe ukuthi umuntu kufanele agweme ukudla okunomsoco wezingane, amaphepha afakwe ekhaya futhi itiye / iziphuzo ngokuvamile, njengoba lokhu kungabangela futhi kubangele ezinye izingozi noma izifo.
Ngesinye isikhathi, icala lokuqala lokushukela kwe-baby lafunyanwa ku-1976 eCalifornia. E-Jalimane, kuye kwaba nesilinganiso sobufakazi obufanayo njalo ngonyaka kusukela ku-1996. Emathunjini we-toxins abhekana ne-baby athuthuka. Noma kunjalo, kungathatha izinsuku ezimbalwa kuya emasontweni ukuze izimpawu zibonakale. Ngakho-ke, kunzima kakhulu odokotela ukucacisa uxhumano phakathi kokudla nezifo. Uma i-toxin ingena egazini ngegazi, isakazwa emzimbeni. Lokho kulandela ukuphela kwesibindi futhi kuvimbele izinqubo ezibalulekile lapho, njengama-fracture ama-muscle. Umphumela uba ukukhubazeka kwemisipha. Ngeshwa, njengomuntu omdala, awukwazi ukuphatha ingane nge-antitoxin.